Dhimista dadweynaha: waa maxay, tusaalooyin, sida ay innoo saameyneyso | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Mid ka mid ah ereyada sida weyn looga maqlo waddanku waa tan xagga hoos u dhaca dadweynaha. Tani ma fiicna haddii ay aad u badan tahay, maxaa yeelay waxay tilmaamaysaa in kharashyada ay ka badan yihiin dakhliga waddanka, taas oo cawaaqib xun leh.
Laakiin, Waa maxay dhab ahaan khasaaraha bulshada? Sida loo qiyaasay? Sidee buu noo saameynayaa? Haddii aad isweydiisay waxaas oo dhan, marka xigta waxaan diiradda saari doonnaa tilmaamahan ka caawinaya in la ogaado haddii waddan uu wax fiican qabanayo ama ay dhibaatooyin ka jiraan dhaqaalahiisa.
1 Waa maxay qasaaraha shacabka
1.1 Khasaaraha dadweynaha ee Spain
1.2 Dhimista dadweynaha iyo deynta dadweynaha
2 Sidee loo xisaabiyaa
3 Sidee loo maalgeliyaa
4 Sida hoos u dhaca dadweynaha noo saameynayo
Waa maxay qasaaraha shacabka
Habka ugu fudud ee lagu sharxi karo khaladaadka dadweynaha waa tusaale. Ka soo qaad in waddanku bilaabo inuu bixiyo wax ka badan inta uu soo galo. Tusaale ahaan, haddii aad gasho 1 milyan oo euro, kharashyadaadu waa 2 milyan. Taasi kharashka dheeraadka ah wuxuu muujinayaa inaad deyn leedahay, waana inaad lacag siisaa kuwa lacagta ku leh, markaa isticmaal qalab aad ku ururiso lacagtaas, amaah ama qaabab kale. Laakiin haddii qarashku sii ahaado mid sareeya, marna ma awoodi doono inuu dhammeeyo khaladaadkiisa, muddada dheerna, waddanku wuu sii faqri gareeyaa oo way sii adkaaneysaa helitaanka lacag.
Ereyga ka soo horjeedka ahi wuxuu noqonayaa wax-soo-saarka dadweynaha, oo macnaheedu yahay in dakhligu ka sarreeyo kharashyada, taas oo ah, inaad haysato lacag aad ku bixiso ama aad maal gashato. Runtu waxay tahay ma sahlana in la helo tusaalooyin tan, laakiin waxaa jira dalal leh hoos u dhac aad u hooseeya oo dadweynaha ah.
Khasaaraha dadweynaha ee Spain
Marka laga hadlayo Isbaanishka, maqnaanshaha dadweynuhu aad ayuu u sarreeyaa. Sida laga soo xigtay Xogta 2020, 10,97% ee GDP ayaa la gaarey, taas oo, marka la barbardhigo ta waddamada kale, sanadkaas aan ku jirnay booska 175 oo ka mid ah 190 dal.
Maxay taasi ku lug leedahay? Hagaag, waxaan kamid nahay boosaska ugu dambeeya xaalad dhibaato leh. Waxaan ka gudubnay hoos udhaca 35637 milyan waxaan u gudubnay yaraanta 123072 milyan, taasoo ahayd koror aad u weyn, qeyb ahaan waxaa sii xumeeyay dhibaatada aafada.
Dhimista dadweynaha iyo deynta dadweynaha
Kuwo badan ayaa ku qaldan in ay u maleeyaan in hoos u dhaca dadweynaha iyo deynta dadweynuhu ay isku mid yihiin, marka run ahaantii aysan ahayn. Farqiga weyn ee u dhexeeya labada erey ayaa ah Khasaaraha dadweynaha waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay isbeddel qulqulaya, halka deynta dawladu noqonayso doorsoome kayd.
Waa maxay tan macnaheedu? Hagaag, cilladaha guud waa farqiga u dhexeeya dakhliga iyo kharashyada waqti go'an; halka deynta guud ay noqoneyso wadarta la aruuriyay ee lagu sameeyay in lagu maalgeliyo maqnaanshaha dadweynaha. Si kale haddii loo dhigo, waa waxa lagu leeyahay kuwa kale ee na amaahiyey inay awoodaan inay buuxiyaan bixinta kharashyada dheeraadka ah ee ay hayaan.
Sidee loo xisaabiyaa
Marka la xisaabinayo khaladaadka dadweynaha, waxaa jira saddex tilmaamayaal aad muhiim u ah oo saameyn ku leh: dakhliga dalka, kharashaadka tan, iyo GDP. Dhammaantood waa in la dejiyaa isla muddadaas, taas oo badiyaa ah hal sano.
Qaaciddada waxay noqon doontaa waxyaabaha soo socda:
Dhimista dadweynaha = dakhliga - kharashyada.
Hadda, waa maxay sababta GDP loo tixgelinayo? Sababtoo ah waxaad sameyn kartaa sharci seddex ah. Hadday 100% noqon lahayd waxsoosaarka guud (GDP), hoos u dhaca dadweynaha wuxuu noqon doonaa x% GDP Tusaale ahaan, ka soo qaad in aad leedahay 1000000 GDP, iyo in dhimistaada guud ay ahayd 100000.
Qaanuunkaan saddexda ah, hoos u dhaca dadweynaha wuxuu noqon doonaa 10% GDP.
Sidee loo maalgeliyaa
Waddan wuxuu leeyahay habab lagu maalgeliyo dhimistiisa dadweynaha. Waxaa ka mid ah:
In kor loo qaado canshuuraha. Ujeedadaadu waa inaad ururiso lacag badan si aad ubixiso kharashyadaada. Dhibaatada jirta ayaa ah in tani ay si toos ah ugu dhacayso dadka wadanka degan, taas oo macnaheedu yahay inay waayaan lacag badan oo ay la soo gudboonaato tayada noloshooda. Sababtaas awgeed, qaar badan ayaa go'aansada inay ka baxaan waddanka.
Soo saar lacag badan. Tani maahan wax caadi ah maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay inuu jiro qiimo dhac ku yimid lacagta, waana wax taban, laakiin waa hab loo adeegsado dalalka horumarsan.
Soo saar deynta dadweynaha. Waa waxa ugu badan ee la sameeyo. Waxay ku saabsan tahay dhigista curaarta dowladda iyo biilasha dowladda ee suuqa si maalgashadayaashu u iibsadaan oo, sidaas darteed, ay u helaan lacag ay ku bixiyaan deyntooda. Dhibaatadu waxay tahay, haddii ay sii weynaato oo ay sii weynaato, aakhirka suurtagal maaha in dib loo bixiyo lacagtii "la amaahday".
Mid kasta oo ka mid ah qaababkani wuxuu ku yeelan karaa cawaaqib xumo qaybaha dhaqaalaha; Sidaa darteed, go'aanka waa in loo qaataa qaab aad loo darsay si aan waxyeello intaa ka badan u soo gaadhin.
Sida hoos u dhaca dadweynaha noo saameynayo
Si loo fahmo dhimista dadweynaha wax ka wanaagsan tusaale. Qiyaas inaad haysato mushahar bil kasta ah 1000 euro. Iyo kharashaadka qaar ee 2000 euro. Taasi waxay muujineysaa inaad ku leedahay 1000 euro, oo aadan haysan, caymis, cunto, iwm. Marka, waxaad samaynaysid waa weyddiisaa saaxiib, qaraabo, kuwaas 1000 euro.
Bisha soo socota, ku laabo isla waxaas, oo waxaad qofkaas weydiisataa 1000 euro oo kale. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad horeyba ugu lahayd 2000, laakiin ka warran haddii sidoo kale ay jiraan dulsaar? Waxay ka sii badnaan laheyd. Haddii ay tani sii socoto, aakhirka waxaad ku yeelan doontaa lacag aad u tiro badan oo aadan awoodi karin inaad dib u bixiso maxaa yeelay, haddii aad sii wado isla sidaas, ma yareyn doontid kharashyada, iyo haddii aadan raadin dakhli dheeraad ah weligood dhammeyn maayo bixinta deynta.
Maxay ka koobnaan lahayd? Hagaag, waxaa jiri lahaa waqti uusan qofkaasi mar dambe lacag badan ku siin doonin. Cidna ma bixin kartid midkoodna, waa inaad bedesho qaab nololeedkaaga si aad ugu noolaato, mid ka xun, ugu yaraan in muddo ah.
Hagaag Isla sidaas oo kale ayaa ka dhacda waddammada marka waxyeelladooda guud ay aad u sarreyso; tayada nolosha dadka ayaa saameyn ku yeelatay oo waddanku wuxuu ku sii kordhayaa deyn badan, wuxuuna imaanayaa xilli uusan sii socon karin, waana marka ay tahay inay badbaadiyaan (ama ha u dhinto).
In kasta oo ay jiraan arrimo badan oo intaa ka sii badan oo wax walbana sidaa u culusayn, haddana waxaad leedahay qiyaastii ugu horraysay ee waxa uu yahay hoos u dhaca dadweynaha iyo waxa ay uga dhigan tahay waddan inuu aad u sarreeyo. Sidaa darteed, mid ka mid ah ujeedooyinka Dawladdu waa inay noqotaa in la yareeyo inta ugu badan ee suurtogalka ah, iyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, si looga fogaado dhibaatooyinka iyo cawaaqibyada waaweyn ee aan sinnaba u noqon doonin wax hagaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Crisis » Dhimista dadweynaha
Tartan monoboli ah